Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 61
Inona no miteraka fahatsiarovan-tena?
Ny fahaverezan'ny fahatsiarovana dia vokatry ny fahatsapana ara-batana na ara-tsaina na antony ara-tsaina. Ny antony voalohany eo amin'ny fahaverezan'ny fahatsiarovana dia aretina ao amin'ny afovoan-tsina ao amin'ny ati-doha, manakana ny fahatsapana tsy hiasa amin'ny alàlan'ny fivavahany. Ity misy ohatra: Raha misy lesoka azo avy amin'ny foibe sy foibe ara-maso sy optic thalami, ka mahatonga azy ireo tsy ho afaka hifandray amin'ny "fahatsarana fahitana" na ny fahitana izay tsy hita, dia tsy mety hahatakatra izany ity tsy fahatakarana ity. ary aza mampiasa ny fantsom-batany mba hamerenany ny saina ilay zavatra ara-batana izay nanaitra ny heviny. Raha misy fiantraikany ny fihetseham-po amin'ny foibe sy ny foibe-foibe, dia tsy afaka miasa ireo ny “saina mahay”, ary noho izany dia tsy afaka mamerina ao an-tsaina ny feony ara-batana na anaran'ny zavatra na toerana izay tsy fahitana ny fahitana. afaka mamerina, ary noho izany dia hisy ny fahaverezan'ny fahatsiarovana, ary ny fitadidiana feo noho ny antony ara-batana. Izany dia hampiseho ny fahaverezan'ny fahatsiarovana tsiro sy ny fofona manitra, noho ny antony ara-batana. Ny tsindry amin'ny afovoan-nerve, tsoka-doha, lohany tampoka noho ny fahalavoana, ny fihenan'ny fihodinan'ny fo, ny fahakiviana manafintohina avy amin'ny zava-mitranga tsy ampoizina, dia mety ho antony avy hatrany amin'ny fahaverezan'ny fahatsiarovana ara-batana.
Raha nesorina na namboarina ny sakana ara-batana sy ny tsy fetezana ao amin'ny afovoan'izy ireo, dia misy kosa ny fahatsiarovana azy vetivety. Raha tsy vita ny fanesorana na fanamboarana dia maharitra maharitra izany fatiantoka.
Ny fitadidiana dia tsy notehirizin'ny zavamiaina ara-batana, na an'ny zavamiaina ara-batana. Ny baiko fitadidiana fito: fahatsiarovana-fahatsiarovana, feo fitadidiana, fahatsiarovana, fahatsiarovana fofona, fahatsiarovana, fahatsiarovana na fahatsiarovana-fahatsiarovana, fahatsiarovana ara-pitondran-tena, "izaho" na fahatsiarovana-famantarana - voalaza ao “Fotoam-panahy miaraka amin'ny namako,” tamin'ny famoahana ny 1915 tamin'ny Novambra- mametraha fitadidiana fahatsiarovana iray manontolo ary eto no anarany. Ny tsirairay amin'ireo fahatsiarovana-fahatsiarovana sy ireo fahatsiarovana fito rehetra niara-niasa sy niara-niasa dia nahatonga ny fahatsiarovana ny maha-olona. Ny fitadidiana ny maha-olona dia manana lafiny roa na lafiny roa: lafiny ara-batana sy lafiny ara-tsaina. Ny lafiny ara-batana momba ny toetra-fahatsiarovana dia misy ifandraisany amin'ny vatana ara-batana sy ny tontolo ara-batana, fa ny fahatsapana sy ny fahatsiarovana ireo dia ao anaty fahatsapana ara-tsaina fa tsy ao amin'ny vatana ara-batana na amin'ireo taova ao anaty fahatsapana. Ny fahatsiarovana ny maha-olona dia manomboka rehefa ny maha-olombelona, ​​ny olombelona, ​​dia mahay manamboatra sy mandamina roa na mihoatra ny fahatsapan-keviny amin'ny maha-izy azy-taova ao amin'ny vatany ary mifantoka amin'ireo zavatra ara-batana iray. Mazava ho azy fa ny fahatsapana "I" dia tsy maintsy ho iray amin'ireo fahatsapana voarindra ary mifantoka amin'ny fahatsapana iray na maromaro mifangaro sy mihanaka amin'ny alàlan'ny taova manokana. Ny fahatsiarovana voalohany ny iray amin'ny fisian'izy ireo eo amin'ny tontolo ara-batana dia rehefa taitra ny fahatsapan'ny “I” toetrany ary niara-noforonina tamin'ny iray na ny fahatsapana hafa, raha mbola nifantoka tamin'ny zavatra ara-batana na nitranga izy ireo. Ny zaza na ny zaza dia afaka mahita zavatra ary maheno feo eo alohan'ny hoe "I" mifoha ary lasa mirindra miaraka amin'ny fahitana sy fandre. Mandritra io fotoana io dia biby fotsiny izy. Tsy mandra-pahafahan'ny zaza mieritreritra na mahatsapa na miteny hoe "Izaho" mifandraika amin'ny fahitana na maheno na fandrenesana hafa, dia manomboka ny fisian'olombelona na fahatsiarovan-tena. Ny lafiny vatana amin'ny fitadidiana ny toetra-miafara dia mifarana amin'ny fahafatesan'ny vatana ara-batana, ary tamin'izany fotoana izany ny singa maha-olombelona miaraka amin'ny fahatsapana dia esorina amin'ny akorany, ny vatana ara-batana, ary tapaka amin'ny taova sy ny ivony-foibe.
Ny lafiny ara-tsaina momba ny fahatsiarovana-toetra dia tokony hanomboka ho kisary na alohan'ny fanombohan'ny fahatsiarovan'ny toetra-fahatsiarovana. Avy eo ny fahatsapana "I" dia hifoha ary hampifandray ny tenany ho toy ny endrika iray na maromaro amin'ireo fahatsapana ara-tsaina, toy ny clairvoyance na clairaudience, ary ireo dia mifandray ary mifandray amin'ny taova ara-batana misy ny toe-tsaina ara-tsaina. ary halamina ny tontolo ara-batana sy mifandraika amin'ny vatan'ny vatana sy ny taovany. Saingy ny fanitsiana ara-tsaina miaraka amin'ny lafiny ara-batana an'ny fahatsiarovan-tena - tsy natao ny fahatsiarovana, ary ny fahatsapana ara-tsaina dia tsy mazàna dia mivelatra amin'ny lehilahy. Ny fahatsiarovan-tsaina ara-tsaina dia matetika mifandray tsara amin'ny taova ara-batana sy ny zavatra ara-batana izay tsy fahitan'ny olombelona manavaka na tsy manana fahatsiarovana ny fisiany.
Raha toa ka mitodika amin'ny zavatra ara-batana ny lafiny ara-tsaina, ny fahatsapana ara-tsaina dia hiafara tsy ho ela aorian'ny fahafatesan'ny vatana ara-batana, ary ho tapitra ny fiainana sy ny fanaon'ny olona, ​​ary ho foana ny fiainana. Ny fisehoan-javatra toy izany dia ho toy ny bodofotsy na blot na akanjo vita amin'ny saina mifandray amin'io toetra io. Rehefa mitodika ny lohahevitra eritreritra, toy ny fanatsarana ny maha-olombelona ny saina, ny fanabeazana sy fanatsarana ny fahatsiarovan-tena amin'ny alàlan'ny fambolena azy amin'ny lohahevitra tsara amin'ny tononkalo, na mozika, na sary hosodoko, na sary sokitra, na fikatsahana tsara ny asa matihanina. , avy eo dia manaitra ny saina ao an-tsaina ny fahatsapana, ary ny saina dia mitondra, ankoatry ny fahafatesana, fahatsiarovana ireo fahatsapana mahatsikaiky tonga lafatra izay notsindriana teo aminy. Rava ny toetra taorian'ny fahafatesana, ary ny fahatsiarovana manokana ny toetra mifandraika amin'ny zavatra ara-batana sy zavatra eo amin'ny fiainana dia potika noho ny fahatapahan'ny fihetseham-po izay nahatonga an'io toetra io. Na aiza na aiza anefa ny fahatsapana ara-tsaina an'io toetra io momba ny lohahevitra tsara mifandraika amin'ny saina, ao no ananan'ny saina azy. Rehefa namorona ny saina ho azy ny toetra vaovao noforonin'ny sainy vaovao, ny fahatsiarovana ny toetra taloha izay nentin'ny saina ho fahatsapana, dia hahatsapa ny saina ary manampy ny fivoarany miaraka amin'ireo lohahevitra manokana nananany. ny ahiahy taloha dia niahiahy.
Ny fahaverezan'ny fahatsiarovana ny fiainana taloha sy ny fiainana talohan'ny nahaterahana dia nateraky ny fahaverezan'ny olona farany sy taloha. Satria tsy misy fahatsiarovana hafa afa-tsy ny baiko fito momba ny maha-olona azy ny olombelona, ​​ny lehilahy iray dia tsy afaka mahalala na tsy mahatadidy ny tenany afa-tsy ny fijerin'ny toetrany, na tsy amin'ny zavatra mifandray amin'io toetra io. Hadinony ny fiainam-piainana taloha satria ny fahatsapan'ny olona iray dia tafasaraka sy rava amin'ny fahafatesana, ary tsy misy navelany hamerina ho toy ny fahatsiarovana fahatsiarovana ao amin'ny fiainana ho avy, ny zavatra nifanaovana an'io toetra io.
Ny ampahany amin'ny fahaverezan'ny fahatsiarovana ireo zavatra mifandray amin'ity fiainana ity dia noho ny faharatsiam-pananana na ny fahaverezan'ny fitaovana vita amin'ny alàlan'ny fahatsiarovana izany, na ny ratra na ny fahaverezan'ny zavamananaina izay mitadidy. Ny fahaverezan'ny fahitana na fandrenesana dia mety noho ny antony ara-batana, toy ny ratra ateraky ny maso na ny sofina. Fa raha ny olona izay antsoina hoe fahitana na ilay olona antsoina hoe feo dia mijanona tsy voatsinontsinona, ary ny simba amin'ny taova dia haverina, dia haverina ny fahitana sy ny fihainoana. Saingy raha ireo tenany ireo dia naratra, dia tsy ho very fotsiny ny fahitana na ny fandrenesana, mifanaraka amin'ny fahavoazana, fa ireo biby ireo dia tsy afaka mamolavola toy ny fahatsiarovana ireo fahitana sy feo izay efa nahazatra azy ireo.
Ny fahaverezan'ny fahatsiarovana, rehefa tsy noho ny antony ara-batana, dia vokatry ny fanararaotana ny sainam-po na noho ny tsy fifehezana sy ny fanabeazana ny sain-tsaina, na amin'ny tsy fanadalana ireo singa tsy misy dikany, ateraky ny fahanterana, na noho ny fisainana. miahiahy amin'ny foto-kevitra mieritreritra fa tsy jerena ny zava-misy ankehitriny
Ny fihoaram-peon'ny firaisana dia miteraka ratra amin'ny antsoina hoe maso; ary ny haavon'ny ratra maharitra dia mamaritra ny haavon'ny fatiantoka na ny fatiantoka tanteraka. Ny tsy firaharahana ny fampiasana ny teny sy ny fifandraisan'ny feo dia manakana ny fivoarana sy ny fivoaran'ny fahatsarana ho toy ny saina mandeha tsara ary mahatonga azy tsy ahavita hamerina toy ny fitadidiana ny feo izay azony. Ny fanararaotana ny felatany na ny tsy miraharaha ny fambolena ny lanilany dia manimba ny antsoina hoe tsiro ary mahatonga azy tsy hahay mampiavaka ny tsiro sy hamerina ny fitadidiana tsiro. Ny alàlan'ny alàlan'ny alikaola dia omen'ny alikaola sy ny manaitaitra hafa, ary amin'ny alàlan'ny famelomana tafahoatra tsy misy fijerena ny tsirony manokana amin'ny tsirony amin'ny sakafo. Ny fahaverezan'ny fahatsiarovan-tena dia mety hitranga amin'ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fiheverana ny fahitana sy ny feo ary ny tsirony, amin'ny fitrandrahana ny kibo sy ny tsinainy mihoatra noho ny ahazoana mandevona azy, na amin'ny fampidirany azy ireo izay tsy azon'izy ireo mandevina. Ny antsoina hoe fofona dia eo amin'ny toetra maha-izy azy, ny maha-mpanao politika manavaka. Ny tsy fanarahan-dalàna ny hetsika, manimba ny fahatsapana hafa, dia mety hanalefaka sy hanary tsy hifantoka amin'ny fofona manitra fofona, na hanimba azy io ary mahatonga azy tsy ho afaka misoratra na mamerina mamerina ireo fihetsika mampiavaka ny zavatra iray; ary, ny famoahana sakafo na tsy fanaka tsy mety dia mitarika na manimba ary mahatonga ny fahaverezan'ny fofona fofona.
Izany no antony mahatonga ny fahaverezan'ny fahatsiarovan-tena manokana fahatsiarovana. Misy lesoka amin'ny fahatsiarovana izay tsy maha-very fahatsiarovana fa na dia antsoina matetika aza izy ireo. Nisy olona handeha hividy lahatsoratra sasany, fa rehefa tonga tany amin'ny fivarotana izy, dia tsy tsaroany ny nalehany. Ny olona iray hafa dia tsy mahatadidy ampahany amin'ny hafatra, na izay alehany, na ny tadiaviny, na ny toerana nametrahany zavatra. Ny iray hafa manadino ny anaran’olona, ​​toerana na zavatra. Ny sasany dia manadino ny isa eo amin'ireo trano na eny an-dalambe izay misy azy. Ny sasany tsy mahatadidy izay nolazainy na nataony omaly na ny herinandro teo aloha, na dia mety hila mamaritra azy ireo aza izy ireo tamin'ny fahazazany. Matetika ireo tsy fahatsiarovana fitadidiana toy izany dia mariky ny fahalafoana na ny fieritreretan'ny saina amin'ny fahanterana; fa na dia ny fandrosoana taloha toy izany aza dia noho ny tsy fisian'ny fifehezana ny sain'olombelona amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny saina, ary amin'ny tsy maha-nampiofana ny sain'ny ho tonga minisitra marina ao an-tsaina. "Ny fahatsiarovana ratsy," fanadinoana "," tsy fisainana, "dia vokatry ny tsy fahaizan'ny fifehezana ny saina fa mety fehezina ny saina. Ny antony hafa tsy fahatsiarovana ny fitadidiana dia ny fandraharahana, fahafinaretana ary trifles, izay manintona ny saina ary avela handeha hamoaka na hanadino izay nokasainy hatao. Ary koa, rehefa mifantoka amin'ny lohahevitra eritreritra ny saina tsy mifandraika amin'ny toe-javatra ankehitriny na amin'ny sain-tsaina, dia mivily mankamin'ny zavatra voajanahary ny sain-tsaina, raha toa ka miasa saina ny saina. Dia avy eo manaraka ny tsy fisainana-fanadinoana, fanadinoana.
Ny tsy fahatsiarovana dia tokony ho voalohany indrindra raha tsy manome ny saina ilaina izay tokony hotsaroana, ary tsy mampahazava ny baiko ary tsy mitaky heriny ampy ny baiko izay tokony ho tsaroana.
Inona no mahatonga ny olona hadinony ny anarany na ny toerana misy azy, na dia tsy voakitika amin'ny lafiny hafa aza ny fahatsiarovany azy?
Ny tsy fahatsiarovana ny anaran'olona sy ny toerana misy olona iray, dia noho ny fandroahana ny fahatsapana ny "I" sy ny fahitana ary ireo feo manaitaitra azy na tsy mifantoka. Rehefa esorina na esorina amin'ny fahatsiarovan-tena ny fahatsapana ny "I", ary misy ifandraisany tsara ny fihetseham-po hafa, ny toetra dia hihetsika nefa tsy manana ny maha izy azy, izany hoe manome azy tsy ho mailo na alaina aminy sampandraharaha hafa. Ilay manana traikefa toy izany dia mety hahafantatra ny toerana sy miresaka momba ny zavatra mahazatra izay tsy mila mamantatra ny tenany. Fa hahatsiaro ho tsy misy na inona na inona izy, banga, very, toy ny hoe mitady zavatra izay fantany sy hadinony. Amin'ity fifandraisana ity dia tsy hanana ny fahatsapan-tena mahazatra ny olona iray. Hiasa izy fa tsy avy amin'ny fahatsapana adidy. Hihinana izy raha noana, misotro rehefa mangetaheta, ary matory rehefa reraka, toa ny biby, rehefa voatosika avy amin'ny voajanahary. Io toe-javatra io dia mety ho vokatry ny fanakanan'ny atidoha, ao amin'ny iray amin'ireo ventricles, na fitsabahana amin'ny vatana pituitary. Raha izany dia haverina amin'ny laoniny ny hevitry ny "I" rehefa nesorina ny sakana. Avy eo, ny fahatsapana "I" dia hifandray indray ary hifantoka amin'ireo fahatsapana hafa, ary io olona io dia hahatsiaro ny anarany avy hatrany, ary hahafantatra ny misy azy sy ny tranony.